जापान-नेपाल सम्बन्ध थप उचाइमा पु-याउन प्रयत्नशील रहनेछुः जापानी राजदूत किकुता
जनतापाटी शनिबार, चैत २१, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । युताका किकुता नेपालका लागि जापानी नवनियुक्त राजदूत हुन् । जापानको परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत कूटनीतिज्ञ किकुता हालै नेपालका लागि राजदूत नियुक्त भएका हुन् ।
यसअघि उनी नाइजेरियाका लागि राजदूत थिए। त्योभन्दाअघि उनले भुटानमा डेपुटी चिफ अफ मिसन र सन २०१५ मा भारतमा पनि डेपुटी चिफ अफ मिसनका रुपमा रहेर काम गरेका थिए । यसअघि थाइल्याण्ड, नेदरल्याण्डलगायतका देशमा रहेका जापानी मिसनमा रहेर काम गरेका एक अनुभवी कूटनीतिज्ञ किकुता हालैमात्र नेपालका लागि जापानी राजदूतमा नियुक्त भएका हुन् । राजदूत किकुतासँग राससले जापानी दूतावासमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
-सबैभन्दा पहिला त नेपालजस्तो देश जहाँ विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा छ र जहाँका नागरिकले “जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी” भन्ने मान्यतालाई अघि सार्ने गर्दछन, यस्तो देशको राजदूतका रुपमा नियुक्त हुन पाउँदा मलाई निकै खुशी लागेको छ । “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” का लागि म नेपाल सरकार र नेपाली नागरिकसँग आगामी दिनमा सहकार्य गरेर अघि बढन चाहन्छु ।
मलाई लाग्छ नेपाल जापान सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु-याउनका लागि जापानसँग धेरै साधन एवं प्रक्रियाहरु पनि छन् । जस्तो कि नागरिकका धारणा एवं आवाज सुनेर तथा नेपालका अनेकन अवसर अर्थात सम्भावना र चुनौती सुनेर पनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिन सकिनेछ, सजिलो पर्नेछ । मैले यस्ता र अरु पनि धेरै सम्भावनाको खोजी गरेर र आवश्यक र सम्भव विधिहरुको प्रयोग गरेर दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप विस्तारित र बलियो बनाउने पक्षमा काम गर्नेछु ।
त्यसपछि नेपाली नागरिकले सन् २०१६ को अप्रिलमा जापानको कुमामोतोमा गएको भूकम्पबाट प्रभावितहरुलाई दालभात पकाएर खुवाएका थिए । सन् २०१५ मा गएको नेपालको भूकम्पपछि जसरी जापानले सहयोग र सदभाव दर्साएको थियो त्यस्तैगरी कुमामोतोको भूकम्पमा पनि नेपालीले सहयोग गरेका थिए र उनीहरुले जापानले पु-याएको सहयोगको सराहना पनि गरेका थिए । यसरी यस्ता अप्ठ्यारा परिस्थितिमा पनि दुई देशका सरकार र जनताका बीचमा भएका सहृदयी सदभावका यी उदाहरणहरुले पनि नेपाल र जापानको सम्बन्ध पारस्परिक सहयोग र सम्मानका साथ अघि बढेको प्रमाणित भएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
पूर्वाधार विकास, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै नेपालको विकासका प्रयासहरुमा जापानले एक प्रमुख दाता राष्ट्रका रुपमा सहयोग पु-याउँदै आएको त विदितै छ । विकसित विश्व परिवेशमा नेपालका उद्यमीहरुले जापानी लगानी, प्रविधि र प्राविधिक सहयोग नेपालमा कसरी आकर्षित गर्न सक्लान् ? नेपाली उद्यमीहरुको यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि जापानी दूतावासले के कस्तो सहयोग गर्न सक्छ ?
-नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हालै बङ्गलादेशको भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले व्यापारमा सन्तुलन तथा व्यापार वृद्धिका लागि यस क्षेत्रमा भएका व्यवधानहरु हटाउनुका साथै पूर्वाधारको विकास र बजारमा सहज पहुँचमा वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । म यस विचारप्रति पूर्णरुपमा सहमत छु । म भन्न चाहन्छु कि नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न पनि यस्तै वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । नेपाली उद्यमीले पनि लगानीमैत्री वातावरणको निर्माणबाट जापानी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्छन् र त्यस्तो अनुकूल वातावरण बनाउन नीतिगत व्यवस्थाले ठूलो अर्थ राख्दछ । यसका लागि धेरै अवसर हुन सक्छन् र यस्तै एउटा हो सन् २०२५ मा जापान, ओसाका, कानसाईमा हुने एक्स्पो २०२५ । नेपालले पनि सहभागिता जनाउने यस एक्स्पो पनि नेपाली उद्यमीका लागि अवसर हुन सक्दछ । यो एक्स्पो नेपालले आफ्नो समृद्धि र खुशी विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने एउटा उपयुक्त अवसर पनि हुनसक्छ ।
जापानले नेपाललाई निकै लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको छ । जापानले नेपाललाई कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पूर्वाधार विकास, सुशासन, शान्ति निर्माण तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । यसका साथै नेपालका सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रममा पनि जापानले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ । यहाँ पैसाको कुरामात्र होइन कि जापानले नेपाललाई प्राविधिक सहायता पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ किनभने राष्ट्र निर्माणको काम वास्तवमा मानवीय स्रोतको विकासबाट नै शुरु हुन्छ भन्ने विश्वास जापानले राख्दछ । यस हिसाबबाट पनि नेपालको एक असल मित्रराष्ट्रका हैसियतबाट जापानले विगत लामो समयदेखि नेपाललाई सहयोग पु-याउँदै आएको छ ।
महामहिम, कोभिड–१९ को महामारीले विश्वभर नै रोजगारी, आर्थिक अवसरमा व्यापक क्षति पुग्नुका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवाको पहुँचमा असर पुगेको छ । जापान सरकारले नेपालजस्ता मुलुकलाई कसरी सहयोग पु-याउने सोचिरहेको छ ?
-हो, हामीले शुरुदेखि नै निकै महत्वपूर्ण योगदान गरेका छौँ र हामीसँग भविष्यका केही योजना पनि छन् । गत वर्षदेखि जापानले कोभाक्स संयन्त्र निर्माणमा योगदान गरिरहेको छ र हालसम्म कोभाक्समा २० करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । म मार्च ७, २०२१ मा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थिएँ, र म नाइजेरियाबाट यहाँ पदस्थापन भएर आएको हुँ । म यहाँ आउँदा यात्रुवाहक विमानसेवामै आएको हुँ जसले नेपालका लागि कोभाक्स सुविधाको खोप लिएर आएको थियो । मैले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, दातृ मुलुकका राजदूतहरु र अन्तरराष्ट्रिय संस्थाका सदस्यसँग कुरा गर्ने मौका पनि पाएको थिएँ । उहाँहरु कोभाक्स सुविधाको खोप स्वीकार्न विमानस्थलमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । यो संयोग हो, तर मेरा लागि यो पहिलो अनुभव थियो ।
-सहयोगको एउटा प्रमुख क्षेत्र समाजको पुनर्निर्माण नै हुनु पर्दछ जुन प्राकृतिक विपदाबाट जतिसक्दो चाँडो पुनर्पाप्ती हुनेछ, र यो “बिल्ड ब्याक बेटर” (बलियो निर्माण) को अवधारणामा आधारित हुनेछ । उदाहरणका लागि, घर र विद्यालयको बलियो संरचना बनाउन सकिए यो प्रभावित समुदायका लागि निकै प्रभावकारी हुनेछ र त्यसले उनीहरुलाई जीवन सहज हुनुका साथै अघि बढ्न सक्षम तुल्याउने छ । मैले माथि भने झैँ, यस्ता प्राकृतिक विपदको हामीसँग साझा अनुभव पनि छन् ।
हामी दुई देशबीचको पर्यटन क्षेत्र अरु विस्तारित होस् भन्ने चाहिरहेका छौँ, किनभने पर्यटनले हाम्रो विश्वमा नयाँ परिदृश्य सिर्जना गरिरहेको हुन्छ । दुःख लाग्दो कुरा के भने नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० अभियानलाई कोभिड–१९ ले असर पु-यायो । तैपनि, नेपाल एयरलाइन्सबाट हुने जापान र नेपालबीचको सोझो हवाई उडान यात्रुका लागि निकै महत्वपूर्ण हुनेछ ।
-मेरो सोचाइमा जापानी जनतामाझ नेपालसँग विशेष घनिष्टतापूर्ण सम्बन्ध रहेको भन्ने नै छ । नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता, बौद्ध परम्परा र संस्कृति, खाना र यहाँका मानिसप्रति जापानीको उच्च सम्मान छ । मेरो घर रहेको फुकुशिमाको मुख्य फूल नै लालीगुराँश हो, जुन नेपालको राष्ट्रिय फूल पनि हो ।
माओवादी केन्द्र प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेला जनकपुरमा, प्रचण्ड सहभागी ११ मिनेट पहिले
फेवाताल मिच्नेहरु चैनले सुत्न पाउँदैनन् - देवकोटा ३८ मिनेट पहिले
अर्जेन्टिनाको मन्त्रिपरिषदमा फेरि फेरबदल ४७ मिनेट पहिले